Abavelisi beemveliso china abavelisi base China ababoneleli kunye nefektri
Ifilimu iDichroic (isiQinisekiso esiQhelekileyo)
Ifilimu yeDichroic PVC
Ifilimu yeDichroic TPU
Ifilimu yeDichroic Window
Ifilimu yeDichroic PET
Ukunyathela ngefoyile ye
Hot Ukunyathela ngefoyile ye
Ingqele Ukunyathela ngefoyile ye
Chill Dichroic Iridescent Window Ifilimu yeGlasi Okanye ye ...
0.2mm Dichroic Iridescent PVC umboniso Izinto Magical ...
Umbala bhanyabhanya wePhepha we-Dichroic Iridescent wokuhombisa ...
0.4mm Dichroic Iridescent PVC umboniso ngokwenza izihlangu, ...
Isinyithi eshushu sokunyathela eshushu china manufacturer uMvelisi wePET izinto zeplastiki kunye nephepha
Sibonelela nge-12micron 64cm * 120m Isinyithi eshushu sokunyathela eshushu China Manufacturer PET Material for plastic and paper. Siye eneemfuno ezizodwa kwiifoyile ezishushu bexhentsa ngaphezu kweminyaka eli-15, egubungela uninzi lweemarike zaseAsia naseMelika. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Ukunyathela okuTshisayo kweFoyile yokuDlulisa ubushushu beKhadi kunye nePhepha
Sinikezela ngeefoyile ezivela kwigolide eyenziwe ngesinyithi, isilivere, kunye nemibala yentsimbi; imibala eyahlukeneyo (tyaba, semi-isilungiseleli seglosi); iinkuni eziziinkozo, imarble, iChrome, ukubonakala kwesikhumba; Ukucoca, ukucoca, iparelecent, kunye nokugqitywa kweholographic. Siye eneemfuno ezizodwa kwiifoyile ezishushu bexhentsa ngaphezu kweminyaka eli-15, egubungela uninzi lweemarike zaseAsia naseMelika. Sijonge phambili ekubeni liqabane lakho lexesha elide e China.
I-Cold Ukunyathela I-foil China Umenzi we-UV Glue kwiphepha, ileyibhile, iplastiki
Sibonelela nge-12micron 64cm * 120m Cold Ukunyathela ngefoyile ye-China uMvelisi we-UV Glue kwiphepha, ileyibhile, iplastiki. Siye eneemfuno ezizodwa Ukunyathela ngefoyile ye ngaphezu kweminyaka eli-15, egubungela uninzi kwimarike Asia kunye American. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Ifilimu yeHolographic eyenziwe ngeMetalized iipatheni ezahlukeneyo zePET kunye neBOPP yeBhodi yePhepha kunye nokuPakisha
Sibonelela ngeHolographic enezixhobo zoLungiso lweFilimu iipateni ezahlukeneyo zePET kunye neBOPP yeBhodi yePhepha kunye nokuPakisha. Siye ngokukodwa ukupakisha umboniso iminyaka engaphezu kwama-15, egubungela uninzi kwimarike yaseYurophu American. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China. Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Ifilimu yeBlaze Dichroic Iridescent yeFestile yeGlasi okanye yeAlicrylic
Sinikezela nge-70u + 23u Dichroic Iridescent Window Film 3M esemgangathweni ye-PET Material i-mylar eJonga iiglasi okanye umhombiso we-Acrylic. Siye ngokukodwa ukupakisha umboniso iminyaka engaphezu kwama-15, egubungela uninzi kwimarike yaseYurophu American. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Chill Dichroic Iridescent Window Ifilimu yeGlasi okanye ye-Acrylic
Ifilimu yeRainbow Iridescent Self Adhesive Window igcwalisa indawo yakho ngokutshintsha imibala efudumeleyo kwaye iyafumaneka kwimixube eyahlukeneyo kunye namanqanaba okuhambisa ukukhanya. Ifilimu yeglasi ye-Iridescent ikwabonelela ngemfihlo ngokufihla ukubonakala ngokuthe ngqo kunye nokuvumela ukuhanjiswa kokukhanya okugqwesileyo .. Besikhethekile kwifilimu yokuhombisa ngaphezulu kweminyaka eli-15, ifilimu yethu yefestile ye-iridescent ithandwa kakhulu kwintengiso yaseYurophu naseMelika. Sinethemba lokuba liqabane lakho lexesha elide e China.
I-0.4mm Dichroic Iridescent TPU yefilimu yokwenza izihlangu, iingxowa kunye nokuhombisa
Sinikezela ngefilimu ye-Dichroic Iridescent TPU ye-2020 yeMagical yokwenza izihlangu, iibhegi kunye nokuhombisa. Besisoloko sikhethekile kwifilimu yokuhombisa ngaphezulu kweminyaka eyi-15, egubungela uninzi lweemarike zaseYurophu nezaseMelika. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Ifilimu ye-0.2mm Iridescent TPU yokwenza izihlangu, iingxowa kunye nokuhombisa
Iridescent TPU Film Rainbow Umbala weMagical Material yokwenza izihlangu, iibhegi kunye nokuhonjiswa kwenziwa nge-TPU kunye ne-PET iridescent film. Imeko-bume enobuntu kunye nezixhobo ezigqibeleleyo zokuhombisa iibhegi zezihlangu kunye nazo zonke iintlobo zoyilo. Besisoloko sikhethekile kwifilimu yokuhombisa ngaphezulu kweminyaka eyi-15, iimveliso zethu ziyathandwa kuninzi lwentengiso yaseYurophu naseMelika. Sinethemba lokuba liqabane lakho lexesha elide e China. Nxibelelana nathi ngoku, siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana nolwaneliseko lwakho.
Ifilimu ye-0.4mm Dichroic Iridescent yePv yokwenza izihlangu, iingxowa kunye nokuhombisa
Sinikezela ngefilimu ye-Dichroic Iridescent ye-PVC yeMagical Material yokwenza izihlangu, iibhegi kunye nokuhombisa. Besisoloko sikhethekile kwifilimu yokuhombisa ngaphezulu kweminyaka eyi-15, egubungela uninzi lweemarike zaseYurophu nezaseMelika. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Ifilimu ye-0.2mm Dichroic Iridescent ye-PVC yeMagical Material yokuhombisa, uyilo lobugcisa kunye nemisebenzi yobugcisa
Ifilimu ye-0.2mm ye-Dichroic Iridescent ye-PVC yeMagical Material yokuhombisa, uyilo lobugcisa kunye nemisebenzi yezandla kukuklanywa kwe-PVC kunye nefilimu ye-iridescent, esetyenziswa kakhulu ekuhombiseni iingxowa, izihlangu kunye neempahla. Ikwayinto efanelekileyo yoyilo lobugcisa kunye nokwenza ubugcisa. Kudala sibonelela ngazo zonke iintlobo zemihombiso yefilimu ngaphezulu kweminyaka eyi-15, iimveliso zethu zithengiswa kuninzi lweemarike zaseYurophu, eMelika naseAsia. Nxibelelana nathi ngoku, siya kukunika umgangatho olungileyo ngenkonzo ebalaseleyo.
Ifilimu yeBlue Dichroic Iridescent yezixhobo zePET zokusetyenziswa komhombiso
Sinikezela ngefilimu eyi-26 Micron Dichroic Iridescent yefilimu engu-2020 ekumgangatho ophezulu wePET yezinto ze-mylar zokusetyenziselwa ukuhombisa. Siye ngokukodwa ukupakisha umboniso iminyaka engaphezu kwama-15, egubungela uninzi kwimarike yaseYurophu American. Silindele ukuba liqabane lakho lexesha elide e-China.
Ifilimu e-Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane yokuPakisha uMhlobiso
I-22 Micron Red Pink Dichroic Iridescent Cellophane Film Magical PET Material mylar for Packing yenye yemveliso yefilimu yokuhombisa. Iimveliso zethu eziphambili ziquka Dichroic umboniso, Self Bukanqinishe Dichroic Film, Dichroic Window film, Holographic film. Zonke ezi zisetyenziswa ngokubanzi ekupakisheni, ekuhombiseni, kuyilo lobugcisa njl. Njl. Ngokunyanisekileyo sijonge phambili ekubeni liqabane lakho ixesha elide e China.
Ngubani thina Ngaba?
Thina, Iindleko zezabelo Jiangxi Royal Import & Export Co., uneminyaka engaphezu kwama-20 yamava kwiiFilling Stamping Hot, iHolographic Film, Iridescent / iDichroic Film, Iridescent / Dichroic Window Film, Iridescent PVC / TPU Film, Fine Chemicals nokunye ...
Iziko le-Rm 501 leHlabathi liphela, uKumkani woMlambo iGan, eYanjiang Mid. Indlela, iNanchang, China
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye pricelist, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala kwiiyure ezingama-24.